‘एम्बाप्पेको इगोका कारण फ्रान्सले युरोकप जित्न सक्दैन’ | सबै खेल
१२ असार २०७८, शनिबार १९:०३
फ्रान्सका युवा स्ट्राइकर किलियन एम्बाप्पेको ‘इगो’का कारण फ्रान्सले यरोकप गुमाउन सक्ने फ्रान्सकै पूर्व खेलाडी जेरोमी रोथेनले बताएका छन्। युरोकपमा चम्किने अपेक्षा गरिएका स्टार खेलाडीमध्येमा पर्छन्, किलियन एम्बाप्पे।
पीएसजीका २२ वर्षे फरवार्डले गत सिजन क्लबका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै कुल ३५ गोल गरेका थिए। तर, जारी युरोकपको समूह चरणका खेल सकिँदासम्म उनले एक गोल पनि गर्न सकेका छैनन्। जर्मनीविरुद्धको खेलमा बललाई जाली चुमाएपनि उनी अफसाइड हुँदा गोल रद्द भएको थियो।
एम्बाप्पे जारी युरोकपमा चल्न नसकेका ५ स्टार खेलाडीमध्येमा पर्छन्। तर, जेरोमी रोथेनका अनुसार उनले गोल गर्न मात्र सकेका छैनन्, फ्रान्सको खेल पनि बिगारिरहेका छन्।
युरोकप अघि भएको खेलमा एम्पबाप्पे र फ्रान्सकै अर्का फरवार्ड ओलिभर जिरुबीच भनाभन चलेको थियो। लण्डन क्लब चेल्सीका स्ट्राइकर जिरुले फ्रान्स र बुल्गेरियाबीचको मैत्रीपूर्ण खेलमा आफ्नै टिमका खेलाडीबाट पास नपाएको गुनासो गरेका थिए।
यसै विषयमा एम्बाप्पे र जिरुबीच चर्काचर्कीहुँदा फ्रान्सको ड्रेसिङ रुमको माहोल युरोकप अगावै खलबलिएको थियो। एम्बाप्पेले पछि जिरुको प्रतिक्रिया आफुलाई ‘मन नपरेको’ स्वीकारेका पनि थिए।
तर, पीएसजीकै पूर्व खेलाडी समेत रहीसकेका जेरोमी रोथेनले भने एम्बाप्पेको इगो अब धेरै बढेको बताउँदै उनको त्यो घमण्ड फ्रान्सका प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्प्सले समेत सम्हाल्न नसक्ने गरि ठूलो भइसकेको दाबी गरे। एम्बाप्पेले जारी युरोकपमा गरेको प्रदर्शन अपेक्षा अनुरुप नभएकोमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
‘उनी मैदानमा आफुलाई खतरा मान्छन् भने मानुन्, केही छैन.. तर उनको इगोले फ्रान्सको टिमलाई मैदानबाहिर पनि असर गर्न थालिसकेको छ। मेरो मुख्य चिन्ताको विषय नै यो हो,’ रोथेनले आरएमसी स्पोर्ट्ससँगको कुराकानीमा भनेका छन्।
‘पीएसजबाट उनले पछिल्लो सिजन कस्तो खेलेका थिए? युरोकपमा उनले फ्रान्सका लागि त्यस्तै खेलेका छन् त? छैनन् नि! खेलाडीले आफुलाई साबित गर्ने मैदानमा हो, तर उनले त्यसो गर्न सकेका छैनन्,’ रोथेनेले थपे।
एम्बाप्पे युरोपका उत्कृष्ट खेलाडीमध्येमा पर्छन्। पीएसजीका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका उनलाई अहिले युरोपकै अर्को सफल क्लब रियल मड्रिडले आवद्ध गर्न खोज्दैछ।
तर, युरोपका यी ‘उत्कृष्ट’ भनिएका खेलाडीले युरोपका प्रभावशाली देशहरुको प्रतिस्पर्धा युरोकपमा भने आफ्नो उत्कृष्टता प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। जारी युरोकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीको सूची बनाउँदा एम्बाप्पे समावेश नहुने रोथेमको तर्क छ।
एमबाप्पेको इगोका अगाडी प्रशिक्षक डेसच्याम्प्सको केही सीप नलागेरै एमबाप्पेले मैदानमा जेपनि गरिरहेको पनि रोथेनले बताएका छन्। एम्बाप्पेले हाल फ्रान्सका अधिकांश सेटपिस प्रहार गर्ने गरेका छन्। फ्रिकिक प्रहार गर्नका लागि पोग्बा र ग्रिजम्यानजस्ता खेलाडी हुँदाहुँदै एम्बाप्पेलाई प्रहार गर्न दिएकोमा रोथेनले आपत्ती जनाए।
‘एम्बाप्पेले २५ मिटरबाट आजसम्म हेर्नलायक फ्रिकिक प्रहार गरेको याद छ तपाईंलाई? ग्रिजम्यान र पोग्बाले त धेरैपटक आफुलाई साबित गरिसकेका छन्, उनीहरुलाई डेसच्याम्प्सले किन नदिएका? एकजना देब्रे खुट्टाले प्रहार गर्न सक्छन्, अर्को दाहिनेले। त्यसोहुँदा एम्बाप्पेको सेटपिसमा के काम?’
‘सायद प्रशिक्षक डेसच्याम्प्स नै एमबाप्पेको इगोदेखि डराउँछन्। एम्बाप्पे राम्रो खेलाडी हुन्, त्यसमा दुईमत छैन। तर, खेलाडीले खेल देखाउने हो, घमण्ड होइन। एम्बाप्पेले युरोकपमा खेल देखाएको मैले चाहीँ देखेको छैन। र, उनले यही क्रमलाई निरन्तरता दिएभने फ्रान्सले युरोकप नजित्न सक्छ,’ रोथेनले चिन्ता व्यक्त गरे।
यो पनि पढ्नुहोस्ः युरोकपमा चल्न नसकेका पाँच स्टार खेलाडी
Tags: euro 2020, france, mbappe
वेल्समाथि सानदार जित निकाल्दै डेनमार्क क्वार्टरफाइनलमा